Thu, Aug 24, 2017 बिहीबार, भदौ ८, २०७४
तारा राई शनिवार, बैशाख २, २०७४ 2157 पटक पढिएको
अन्धकारको राज थियो । औंसीको रातमा झैं ताराहरू रोइरहेका थिए, सायद जुन उदाउने तर्खरमा थियो क्यारे ! जूनकिरीहरू अँध्यारो चिर्ने असफल प्रयासमा रमाइरहेका थिए । मैले मेरो संसारलाई नियालेँ— त्यो रातझैं अन्धकार र कहालीलाग्दो थियो । जीवनयात्रामा म एक्लै थिएँ, मेरो अवस्थाप्रति सहानुभूति राखिदिनेसम्म साथमा कोही थिएन । म सुँक्कसुँक्क रोइरहँदा 'किन रुन्छ्यौ ? ' भनेर सोध्नेसम्म कोही थिएन।
मेरा सबै खुसी अनि उमंग बारुदको धुवाँसँगै कहाँ पुग्यो कहाँ ? मैले आफ्नो सौभाग्यलाई गुमाइसकेकी थिएँ । मेरो दुःखसुखमा साथ दिने मेरो जीवन सहयात्री स्मृतिको बगैंचामा फुलिरहेको थियो । अब त ऊ मेरो सम्झनामा मात्र बाँचिरहेछ । आज ऊ मेरो समीप भइदिएको भए... ! तर सोचेजस्तो रहेनछ जीवनयात्रा । कहालीलाग्दो रहेछ जीवनको गोरेटो । देशमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा मैले आफ्नो सहयात्री पनि हराइसकेकी थिएँ ।
सैनिक टोलीको अन्तिम सलामीसँगै मैले उसलाई बिदा गरेको पनि दुई वर्ष बित्नै लागेछ । टेबलमा हेरेँ उसको फोटो, मुटुभित्र गाँठो पर्‍यो । अ श्रुधारा छुटेर छातीसम्म भिजायो, आँखाभरि अतीत नाचिरह्यो वर्तमान बनेर ।आज नेपाली सेना दिवस, जिल्लास्थित सैनिक गणमा कार्यक्रम थियो— म पनि आमन्त्रित थिएँ । सेना दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । वीरगति प्राप्त अमर सिपाहीका परिवारलाई सम्मान गरियो, वीरगति प्राप्त सिपाहीहरूको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिँदा हामी सबैको आँखा आँसुले डम्म थियो । आफ्नो मुटु चुँडाएर मैले सम्झना स्मारकमा फूलमाला अर्पण गरेँ ।
अनुप र म सानैदेखिको साथी, बाल्यकालदेखि नै हामी एकअर्कालाई धेरै माया गथ्र्यौं । म राईकी छोरी, ऊ क्षेत्रीको छोरा । तर, हामीमा भेदभाव- छुवाछूतको भावना कहिल्यै आएन, एकलाई घाउ लागे अर्कोलाई दुख्थ्यो । अनुप र मैले राम्रो अंकका साथ एसएलसी पास गर्‍यौं । म आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनका लागि सदरमुकाम नै जाने भएँ । अनुप भने गाउँको उच्च माविमा नै पढ्ने भयो, उसको पारिवारिक अवस्थाले गर्दा । हामी टाढा भयौं । पाखा, पर्वत, डाँडाहरूले हामीलाई छेकिदियो । तर, भौगोलिक रूपमा जति नै टाढा भए पनि हामीमा स्नेहको बन्धन थियो जसले गर्दा सधैं सँगै छौंजस्तो लाग्थ्यो । बाल्यकालको लुकी, डुम, चोर-पुलिस खेल्दाखेल्दै र घाँसदाउरा, मेलापात गर्दागर्दै हामी त एकअर्काको परिपूरक भइसकेछौं ।
समय आफ्नै गतिमा बढिरह्यो । अनुपको आमा साह्रै बिरामी हुनुभएको खबर पाएर गाउँ करफोक पुगेँ । आमाको अवस्था ज्यादै नाजुक रहेछ । अन्ततः दमरोगका कारण हामीले आमालाई गुमाउन पुग्यौं । जातीय परम्पराअनुसार आमाको दाहसंस्कार गर्‍यौं अनि पुनः हृदयको आलो घाउ सुमसुम्याउँदै सबै आ-आफ्नो गोरेटोतिर लाग्यौं ।म इलाम पुगेको १० दिनपछि अनुपको कोठामा आइपुगेछु, इलामस्थित मेरो भाडाको घरमा । अनुपको शारीरिक अवस्था ज्यादै खस्केको थियो । नमीठो लाग्यो, मुटुभित्र कताकता दुखेजस्तो लाग्यो ।
'मुना आराम छौ ? ' अनुपको प्रश्न थियो ।
'अँ' मैले जवाफ दिएँ ।
पूर्णिमाको चन्द्रमाजस्तै अनुपको मुहारमा औंसीको साम्राज्य फैलिएको थियो । मैले महसुस गरेँ, 'अनुप धेरै मुर्झाएछ ।'
केहीबेरको कुराकानीपश्चात् अनुपले भन्यो, 'मुना चारआली ब्यारेकमा सेनाको भर्ती खुलेको छ रे ! म पनि जानुपर्‍यो... हेर न घरमा पनि को छ र ? घरबारी नि बन्धकी राखेको छु । म त यो ठूलो संसारमा एक्लो भएँ... !' यति भनेर अनुपले आँखाको आँसु पुछ्यो ।
मलाई आफैंले टेकेको धर्ती फाटेर आफू भासिएको जस्तो लाग्यो ।
'संकटकालीन अवस्था ? ' मैले विस्तारै भनेँ, 'पेट त पाल्नैपर्‍यो नि ! मुना, जीवन चलाउनैपर्‍यो दुई-चार पैसा कमाउनुपर्‍यो । हाम्रो भविष्य पनि त हेर्नु छ । बुवाले पनि माया मार्नुभयो बाँचेको, मरेको पत्तो छैन । खोज्न कहाँ जाऊँ ? ...' अनुपले त्यो दिन मलाई सम्झाउँदै भनेथ्यो ।
मैले अनुपको बाटो छेकेर रुन सकिनँ, उपाय पनि त थिएन । हामी परिबन्धको जालमा परिसकेका थियौं।
अनुपलाई मुटु नै चुँडाएर बिदाइको हात हल्लाएँ । यो मेरो गर्व र खुसीको कुरा थियो- आफूले माया गरेको प्रिय मान्छे राष्ट्रको रक्षार्थ उभिँदै छ । तर, पीडा र त्रासले एकैचोटि अठ्याएको अनुभव पनि भयो।
समय निरन्तर अगाडि बढिरह्यो । हामी उसका पाइला पछ्याउँदै उसकै पछि लागिरह्यौं । वसन्तले पालुवा लिएर आयो फेरि शिशिर उसको पछिपछि उजाड बनाउन आइपुग्यो । अनुपको ट्रेनिङ सकियो, आफ्नो जिम्मेवारीलाई अँगाल्दै अनुप २ नं. बाहिनीअन्तर्गतको धनकुटा ब्यारेक खटियो ।
म प्रत्येक क्षण अनुपको कार्यकुशलताको लागि भगवान्सँग प्रार्थना गर्थें, जुन मन्दिर पुगे पनि उसकै नाम लिन्थें । हामीबीचमा पत्रको आदानप्रदान भइरहन्थ्यो, कहिलेकाहीँ टेलिफोनमा पनि कुरा हुने गथ्र्यो । हाम्रो माया र प्रेम फुलिरह्यो, विश्वासको सुगन्ध छरेर ।
म प्रेम र कर्तव्यको दोसाँधमा उभिएकी थिएँ । एकातिर बाबा, आमा, परिवारप्रतिको कर्तव्य अर्कोतिर अनुपप्रतिको अथाह प्रेम । परिवार चाहन्थ्यो जातकै केटासित मेरो बिहे होस् तर म कसरी परिवारको इच्छामा चल्न सक्थेँ र ?
मेरो दोस्रो वर्षको पढाइ पनि सकियो, परीक्षा दिएर म घर फर्कें । अनुपबिना गाउँघर, वनजंगल शून्य र उजाड थियो मेरा लागि । मेरो दैनिकी फेरि मेलापात, घाँसदाउरा गर्दै बित्न थाल्यो । जीवनको २१औं वसन्त पार हुनै लागेको थियो— मेरो गाउँघरको त्यो परिवेशभित्र मेरो कुरा काट्नेहरू पनि लामबद्ध उभिएका थिए ।
'छोरीचेली उमेर पुगेपछि माइत बस्नुहुन्न' यस्तै वचन सुन्नुपथ्र्यो मैले, पाइलाहरू एकाएकै भारि लाग्थ्यो ।
'मुना त बूढीकन्या बस्छे कि क्या हो ? ' यी प्रश्नहरू मेरो अघिपछि उठिरहन्थे । प्रश्नैप्रश्नको पहाड थियो मेरो वरिपरि । प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दा अनुपको प्रतीक्षामा बलेको दियो कहिलेकाहीँ झ्याप्प निभ्न खोज्थ्यो तर म मायालु हत्केलाले बतास छेक्थें ।
'आर्मीको त विश्वास नै हुँदैन...' कसैकसैले भन्दा मुटु मेरो टुक्राटुक्रा भएजस्तै लाग्थ्यो । यता मेरो घरमा विवाहको कुरा चल्न थाल्यो । म प्रेम र कर्तव्यको दोसाँधमा उभिएकी थिएँ । एकातिर बाबा, आमा, परिवारप्रतिको कर्तव्य अर्कोतिर अनुपप्रतिको अथाह प्रेम । परिवार चाहन्थ्यो जातकै केटासित मेरो बिहे होस् तर म कसरी परिवारको इच्छामा चल्न सक्थेँ र ?
देशको राजनीतिक अवस्था झन्झन् जटिल बन्दै गइरहेको थियो । हत्या, आतंक, अपहरण, बन्द-हडतालले जनजीवन कष्टकर बन्दै थियो । यो बीचमा अनुपको सरुवा पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरी भइसकेको थियो । अत्यन्तै कठिन मोडमा हामीले नयाँ जीवनको निर्णय गर्‍यौं ।
कुन छोरीलाई रहर हुन्न— जन्ती, बाजासँग जन्मघरबाट अन्मिएर पराइघर जाने ? तर, मेरा लागि सम्भव थिएन बेहुली हुने । जन्मघरबाट रुँदैरुँदै बिदा हुने मेरो कल्पना कर्कलाको पातमा छल्किएको शीतको थोपाझैं भयो । हाम्रो सम्बन्ध, प्रेमलाई स्विकार्न कोही नै अघि सरेनन् न मेरा माइतीहरू न त अनुपका आफन्तहरू ! तैपनि हामी खुसी नै थियौं । एकअर्कामा पूर्ण भरोसा थियो । म असाध्यै खुसी थिएँ कि एक राष्ट्रभक्त सिपाहीकी जीवन सहयात्री भएकीमा । मैले अनुपलाई सम्पूर्ण रूपमा लुकाइसकेकी थिएँ मेरो खाली सिउँदोमा । अनुप र म नयाँ जीवनको गोरेटो पहिल्याउँदै थियौं । अनुप चौबीसैघन्टा व्यस्त हुन्थ्यो ड्युटीमा, मैले बम बारुदभित्रको वास्तविक जीवन चिनेँ, म त्यो बिरानो सहर इटहरीमा रमाउने प्रयास गर्दै थिएँ । बिदा पास भएको साँझ मुसुक्कै हाँस्दै अनुप कोठा आइपुग्थ्यो । अनुपको तलबले जेनतेन जीवन चल्दै गयो ।
'एकजनाको कमाइले कसरी घरसंसार चलाउने अनुप ? ' मेरो प्रश्न हुन्थ्यो । तिमीलाई केको दुःख ? म शान्ति सेना जान्छु थोरै पैसा जम्मा हुन्छ, सञ्चयकोष छ । पल्टनले सहयोग गर्छ । सानो घर बनाउँला, रिटायर्डपछि म विदेश जान्छु, चलिहाल्छ नि जीवन मुना,' अनुपको सपना थियो ।
'पर्दैन अर्काको देशमा जान,' म भन्थेँ ।
'लौ, खेती गरौंला नि त उसो भए,' मुसुक्क हाँस्दै भन्थ्यो अनुप ।
दिनैको भिडन्त । मन सधैं आत्तिरहन्थ्यो । एक दिन अनुपलाई भनेँ, 'अनुप, यस्तो भयावह अवस्था जागिर छोडिदेऊ...'
'मुना, म भनेको सैनिक हुँ । मैले देश रक्षाको शपथ खाएको छु । मैले स्वार्थी बन्नु हुँदैन । राष्ट्रको यो संकटकालीन अवस्थामा अझ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ...'
'सँगै दुःख गरौं,' मैले पुनः जागिर छोड्न आग्रह गरेँ । 'कहाँ गर्छौ दुःख ? भएको घरबारी बन्धकी छ । गाउँ जाने त वातावरण नै छैन... सहरमा कसरी टिक्ने ? भोलि सन्तान होलान्, कसरी पाल्ने ? पढाउने ? मुना घरबारी निखन्न पाए एउटा आधार बन्थ्यो । पर्ख न केही समय भोलि कसो सुनौलो बिहान नआउला ? हेर, मैले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ । मलाई हिम्मत देऊ मुना ।'
यस्तै सपना सजाउँथ्यो अनुप आँखैभरि ।
हाम्रो विवाहको एक वर्ष पूरा भएको पनि पत्तै भएन । यही बीचमा हाम्रो प्रेमको प्रतीक, जीवनको सार यो धर्तीमा पाइला चाल्नलाई फूलझैं फुल्यो हाम्रो मायाको बगैंचामा । म आमा बनिसकेकी थिएँ, अनुप ड्युटीमा गण, हेडक्वार्टर त कहिले पोस्ट खटिन्थ्यो । अनुप मेरा लागि मायालु, आदर्शवान् पनि थियो, छोराका लागि मायालु बाबु थियो अनि राष्ट्रका लागि कर्तव्यनिष्ठ सिपाही थियो ।
'सेनाको अर्को रूप कर्तव्य हो,' अनुप सधैं भन्थ्यो । छोराको आगमनसँगै अनुपको एक तह बढुवा भयो, दुःखले घरबारी आफ्नो बनायौं । सशस्त्र द्वन्द्व झनै चर्कंदै गइरहेथ्यो ।
'मुना म मरिहालेँ भने तिम्रो र छोराको कस्तो बिजोग हुन्छ होला...!' अनुप कहिलेकाहीँ भन्ने गथ्र्यो ।
'के नचाहिँदो कुरा गरेको ? ' मैले भन्ने वाक्य यही नै थियो ।
आँखाभरि आँसु जम्थ्यो, छातीभित्र कता पहिरो गएजस्तै लाग्थ्यो मलाई ।
'युद्धभूमिमा खटिएको सिपाहीको के भर मुना ? बन्दुकको गोली कताबाट छुट्छ दुश्मनको थाहा हुँदैन । कहाँ पुग्दा यो प्राणको अन्त्य हुन्छ के थाहा ? '
अनुपको गण इलाम आइसकेको थियो सरुवा भएर । समयको अन्तरालसँगै हामीलाई घरपरिवारले स्विकारिसकेका थिए । तर, अनुपको बिदा नमिलेका कारण जान सकेका थिएनौं । घर परिवारले स्विकारेपश्चात् मलाई एक प्रकारको शान्ति मिलेको थियो ।
परिवारको आडले होला, म अझ अनुपलाई जागिर छोड्न दबाब दिन थालेकी थिएँ । आज शुक्रबार साँझ अनुप कोठामा हाँस्दै आइपुग्यो, मलाई उसको व्यवहारदेखि झर्को लागिरहेको थियो ।
'के भयो मुना ? अँध्यारो छ नि अनुहार, किन रिसाएकी ? ' अनुपले आग्रहसहित प्रेमले सोधेथ्यो ।
ऊ केही नबोली छोरालाई काखमा लिएर खेलाउन थाल्यो । म अनुपलाई भर्सक जागिर छोडाउनै चाहन्थें । सम्झन्छु आज, मेरो जागिर छोडाउने दृढतादेखि अनुप दिक्क भइसकेको थियो । यसपालि पनि जागिर छोड्न दबाब दिन भूमिका बाँध्न के लागेकी थिएँ— अनुप झनक्क रिसायो, यसअघि ऊ कहिल्यै यसरी रिसाएको थिएन ।
'तिमी जे भन मान्छु तर जागिर छोड्न सक्दिनँ । मेरो, हाम्रो प्राण यही जागिरले बचाएको छ । आज तिमी जुन ठाउँमा उभिएकी छौ त्यो सिंगो नेपाली सेनाको छत्रछाया हो,' अनुपले नि झर्कंदै भन्यो ।
'तिमी मेरो मन कहिल्यै बुझ्दैनौं अनुप...'
'तिमीले कति बुझ्यौ मुना ? म कुनै पनि हालतमा भगौडा बन्न सक्दिनँ, मेरो नैतिकताले दिँदैन ।'
'आज तिमीलाई मेरोभन्दा नैतिकताको माया लाग्यो ? ' मैले त्यो दिन किन यसो भने हुँला ? सम्झन्छु आज । कोठाको वातावरण अत्यासलाग्दो भएर आयो ।
'म यो कठिन मोडमा राष्ट्रलाई, संस्थालाई धोका दिन सक्दिनँ ।'
'उसो भए म र छोराभन्दा तिम्रो लागि तिम्रो संस्था प्यारो भयो ? '
'मुना म सैनिक हुँ, देशको रक्षार्थ खट्छु । शिरमा देश र काँधमा कर्तव्य छ मेरो । मुटुभित्र तिमी दुई आमा-छोरा ! म कर्तव्यपथबाट भाग्न सक्दिनँ । मुना, तिमीमात्र अनुपकी पत्नी हैनौ, तिमी त कर्तव्यनिष्ट सिपाहीको पत्नी हौ ।'
अनि, अनुप जुरुक्क उठेर ब्यारेकतर्फ लाग्यो । मैले कोठाको झ्यालबाट देखेँ ब्यारेकको १ नं. गेट पार गरेर गएको अनुपलाई, एक प्रकारले नरमाइलो लाग्यो । अनुपको हृदयमा राष्ट्र र संगठनप्रतिको श्रद्धा देखेर मैले पनि सिपाही पत्नी हुनुको गर्विलो इतिहास खोतल्न थालेँ, पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा अनुपप्रति, अनुपको अगाडि सबै श्रद्धा पोखिदिएँ । अनुपको अनुपस्थितिमा आफैंलाई शून्य-शून्य लाग्यो । पश्चातापको महसुस गरेँ । तर, म कहाँ झुकेर अनुपलाई बोलाउँथेँ र ? जहिले पनि ऊ नै झुक्नुपथ्र्यो तर किन हो त्यो दिन अनुप पनि झुक्न चाहेन ।
रातभरि निदाउनै सकिनँ, छटपटी भइरह्यो । दुई-चार दिनसम्म हाम्रो बोलचाल नै भएन ।
पाँचौं दिन कोठामा आएर अनुपले भन्यो, 'मुना, पुवाखोलामा माओवादीले सडक अवरुद्ध गर्‍या छन् रे ! मेरो ड्युटी पर्‍यो... यसो हतारमा मिलाएर भन्न आएको...' मेरो हृदयमा कोलाहल मच्चियो ।
आँखाबाट बर्रर आँसु खस्यो ।
'किन रोएकी फेरि ? तिम्रा आँसुले मेरा पाइलाहरू लर्खराउँछन् । नरोऊ ! सिपाही पत्नी कहाँ यसरी रुन्छन् र !? ', अनुपले छातीमा टाँसेर भनेथ्यो मलाई ।
'आफ्नो ख्याल गर है !...'
'हैन तैपनि,' मैले भनेकी थिएँ ।
'केही हुन्न म मरे अमर सिपाहीकी अर्धांगिनी हुन्छ्यौ,' अनुप यति भनेर सधैं मुसुक्क हाँस्थ्यो ।
म केही बोल्नै सकिनँ ।
'मुना म भनेको लडाइँमा खटिएको सिपाही हुँ । यसै भन्न सकिन्न बाँचे तिम्रो काख मरे कहाँ हो !? मसँग चित्त नदुखाऊ कि मैले तिम्रो वचन काटेँ भनेर । तिमीलाई कति माया गर्छु भन्ने त मलाई मात्र थाहा होला । छोराको राम्रो ख्याल गर्नु... मेरो त खै के भर ? आज यहाँ भोलि कहाँ ? हामी सिपाहीको निम्ति भोलि आउँदैन आज छ, अहिले छ । नाकको टुप्पोमै छ तिम्रो रिस तर अबदेखि नरिसाऊ है !' भनेर अनुप मुसुक्क हाँसेथ्यो ।
'कहिल्यै रिसाउँदिन अनुप, तिम्रो मन दुखाउँदिनँ । तिम्रो वचन काट्दिनँ । मैले तिमीलाई चिनेकी रहिनछु । म खुसी छु, जागिर छोड कहिल्यै भन्दिनँ ।'
अनुपको आँखाभरि आँसु भरियो ।
'सिपाहीको मन पनि यस्तो कमजोर हुन्छ र ? सिपाही अरू बेला मायालु भए पनि ड्युटीमा त कठोर हुनुपर्छ । म भगवान्सँग तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छु । तिमीले नै भनेको होइन, 'सिपाहीको अर्को रूप कर्तव्य हो' भनेर ?
छोरालाई सुमसुम्याएर मेरो शिरमा चुम्दै अनुप कोठाबाट बाहिरियो ।
मनै अमिलो भयो, खुट्टाहरू गलेर आयो । आँखाभरि अँध्यारो छायो ।
ब्यारेकदेखि सर्च टोली निस्कियो । म बाटोमा नै उभिएकी थिएँ ।
गडक-गडक बुटको आवाजसँगै सैनिक टोली अगाडि बढ्यो ।
कम्ब्याट ड्रेस, छातीभरि गोलीगठ्ठा, काँधमा एसएमजी बोकेर अनुपले बिदा माग्यो ।
'चाँडै फर्क...' मैले भनेकी थिएँ ।
छोरा मेरो हातबाट बाबातिरै जान खोज्दै थियो 'आइहाल्छु...' अनुपको शब्द यति नै थियो ।
मेरो आँखाबाट आँसु खसे । मनभित्र भक्कानो छुट्यो । कठै ! सम्झन्छु आज त्यो बेला अनुपको हृदय कस्तो भएको थियो होला ?
हेर्दाहेर्दै डाँडामा छेलियो सैनिक टोली । म बाटोमा नै उभिरहेँ । छोरा काँधमा नै निदाएछ ।
'भाउजू, के भयो हजुरलाई ? ' माथि ड्युटी पोस्ट्बाट कसैले भन्दा झसंग भएकी थिएँ ।
तीन-चार घन्टापछि संसारै थर्काएर बम पडयो, लाग्यो मेरो दुनियाँ तहसनहस भयो । मैले भएभरका देवी-देवता पुकारेँ, मेरो शरीर चिसो भएको अनुभव गरेँ ।
'अवरोध हटाई फर्केको टोलीलाई माओवादीले आक्रमण गर्दा २३ जनाले वीरगति पाए ।'
'अनुप पनि घाइते भएको,' सुनेँ फेरि ।
लगत्तै थप सैनिकहरू घटनास्थलतर्फ लागे ।
म हतारिँदै इलाम अस्पताल पुगेँ सैनिक टोलीसँगै । त्यहाँ पुग्दा थाहा भयो मेरो अनुप पनि अनन्तमा हराइसकेछ । 'सँगै मर्छु' भन्ने मेरो अनुपले मलाई बीच बाटोमा एक्लै छाडेर नेपाली सेनाको इतिहासमा अमर बनिसकेछ । वीरगति प्राप्त सैनिकहरूको पार्थिव शरीरले अस्पतालको आँगन भरियो । घाइतेहरूलाई छाउनी हस्पिटल लैजाने तयारी भयो । म शून्य-शून्य थिएँ, रुवावासी चल्यो, हामी विधवा भयौं, छोराछोरी टुहुरा भए, आमाहरूको काख रित्तियो ।
वीरगति प्राप्त सिपाहीहरूलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिने काम भयो । उनीहरूको मृत्युमा धर्ती-आकाश रोइरहेको थियो । आफ्नै अगाडि आफ्नै सिपाहीहरूको त्यति धेरै पार्थिव शरीर देख्दा मैले रुनै भुलेँ । कसलाई ? कसले अँगालेर रुने ? तैपनि म अनुपलाई अँगालेर रुन थालेँ ।
मलाई अनुप निदाएजस्तो मात्र लाग्यो, मेरो मुटुले त्यो स्वीकार्न पटक्कै मानेन ।
'मुना, नरोऊ बाबु ! मनलाई कमजोर नबनाऊ ! तिमी वीर सिपाहीकी जीवनसंगिनी हौ । आफ्नो स्वार्थमा रगत बगाएको हैन अनुपहरूले... तिमी कहाँ एक्ली छौ ? यस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको सिंगो संस्था साथमा छ । तिम्रो आँसुले अनुपको आत्माले शान्ति पाउँदैन,' मेजर सापले मलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभएको थियो ।
मेजर सापको पनि आँखामा आँसु थियो, हृदयमा उकुसमुकुस । अनुप उहाँको प्रिय थियो, हामीलाई मेजर सापले अभिभावकत्व दिनुभएको थियो जीवनको कठिन मोडमा ।फूलैफूलले ढाकिएको थियो अनुपको पार्थिव शरीर, माईखोलामा अन्तिम संस्कार सकिने भयो । चितामा अनुपसँगै अन्य तीन-चार जनाको पार्थिव शरीर राखेर एक सैन्य टोलीले अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्‍यो । सधैं अनुपको सलामी लिने अधिकृतहरूले पनि आज अनुपलाई श्रद्धाले शिर झुकाएर अन्तिम सलामी अर्पण गर्दै थिए । सधैं आफ्ना सिनियरका अगाडि जंगी अनुशासनमा तनक्क छाती तन्काएर बलिष्ठ, कोमल हात उठाएर सलामी दिने मेरो अनुप निश्चल र अचल थियो ।
संसारै घुमेजस्तो लागेर आयो, मेरो त दुनियाँ केही थिएन । 'अनुप.. अनुप,' मैले अनुपलाई बोलाएँ, कतै बोल्छजस्तै लागेको थियो, एउटा नमीठो सपना !
फेरि मनलाई सम्झाएँ, 'म सिपाही पत्नी हुँ' भनेर ।
मेरो अगाडि भविष्य अन्धकार थियो ।
अनुपका काकाकाकी, मेरा माइतीहरू आर्यघाट आइपुगेछन् । म उनीहरूका अगाडि रुनै सकिनँ ।
मैले दुई वर्षको छोरालाई काखी च्यापेर अनुपको पार्थिव शरीरमा दागबत्ती दिएँ । मलाई माया गर्ने मेरो अनुपलाई आगोको लप्काले खरानी बनायो । मलाई पनि त्यो ज्वालामा अनुपसँगै जलेर खरानी बन्न मन लाग्यो तर काखमा छोरा थियो सकिनँ, आमा भएको नाताले ।
आँखैअगाडि अनुपको शरीर खरानी भयो । अनि हेर्दाहेर्दै आगोका ज्वाला शान्त बने ।म सैनिक टोलीसँगै इलाम सदरमुकाम फर्किएँ । आँखाभरि अनुपको अन्तिम झल्को आँखामा आइरह्यो, रगतले पूरै ड्रेस भिजेको थियो । छाती, पाखुरा र पेटमा गोली लागेकाले बढी रक्तस्राव भएर अनुहार पहेँलो थियो । मेरो आँखामा सधैं नै अनुप हाँसिरह्यो ।
बारुदको धुवाँमा एक मुठी सास बचाउने मेरो अनुप कता हरायो ? कता गयो ? 'सातै जन्म सँगै हुन्छु' भन्ने अनुपले एक्लै बनाएर गयो । सानो घर, सुखी परिवार एउटै सपना थियो । शान्ति सेना जाने, अवकाशपछिको जीवन समाजसेवामा बिताउने चाहना थियो अनुपको । अनुपले आफूलाई कहिल्यै राष्ट्र र संगठनभन्दा टाढा राखेन । आफू रोयो । तर, मलाई कहिल्यै रुवाएन ।
विगत सम्झँदै म वर्तमानसम्म आइपुगेँ, टेबलमा अनुपको तस्बिर उस्तै गरी हाँसिरहेको थियो । ओछ्यानमा छोरा निदाइसकेको थियो । दिनभरि ब्यारेकमा सिपाहीहरूले बोकेर यताउता गरेकाले थाकेछ पनि ।
अनुपको सम्झना अझ गाढा बन्दै गयो । आँखाबाट खसेका आँसुले छाती पनि लछप्पै भिज्यो । जन्मँदै मृत्युसामु आउँछु भनेर आएका हामी, मृत्यु सत्य हो भनेर जान्दाजान्दै सत्यता पचाउन गाह्रो हुँदो रहेछ ।
आजजस्तो शान्ति हिजो भएको भए ! हजारौं बालबच्चाहरू टुहुरा हुने थिएनन् । सम्झिएँ पुनः मुटुमा गाँठो पर्‍यो । अनुपको तस्बिरमा टोलाएँ, उसको चिरशान्तिमा श्रद्धाको आँसु खसाएँ आँखाबाट । मसँग उसको लागि त्यो आँसु र सम्झनाबाहेक के थियो र ? अनुपको सम्झनाले अँगालेर अनुपको छातीमा मलाई टाँसिदियो । अनुपको कम्ब्याट ड्रेस, ब्याग, म्याट्रेस, बुट सबै छातीमा टाँसेँ । कहालिएर रुन मन लाग्यो तर सकिनँ ।
'मुना, कमजोर नबन, तिमी सिपाहीकी पत्नी हौ । तिमी एक्ली छैनौ । तिम्रो साथ संगठन छ, राष्ट्र छ । छोराको भविष्यको लागि मन सम्हाल,' कानैमा अनुपको शब्द गुञ्जियो ।
आँसुले अनुपको तस्बिर धोएँ । म यसरी नै प्रत्येक सैनिक दिवसमा कतै गर्छु । ब्यारेक पुग्दा गेटमा अनुप सधैं पर्खिरहेको छ जस्तै लाग्छ । मेरो अनुपलाई र अनुपजस्तै राष्ट्रको निम्ति रगत बगाउने सिपाहीहरूलाई सम्झनाको श्रद्धाफूलबाहेक के पो चढाउन सक्छु र ?
शनिवार, भदौ ३, २०७४ ख्यालःदेखि प्रहसनसम्म
शनिवार, भदौ ३, २०७४ गणतन्त्रको धुरी
शनिवार, भदौ ३, २०७४ अवशानको धुुन
शनिवार, भदौ ३, २०७४ जिजुआमाको लक्की बल
शनिवार, भदौ ३, २०७४ के भ्रष्टाचार गर्नसक्नु पुरुषार्थ हो ?
शनिवार, भदौ ३, २०७४ विस्फोटक बौद्धिक सुन्दरता
शनिवार, भदौ ३, २०७४ अबको काठमाडौं : मरुभूमि कि हराभरा ?
शनिवार, भदौ ३, २०७४ भारतको विषाक्त लोकतन्त्र
प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘गार्ड अफ अनर 1330
क्षेत्राधिकार मिचेर अस्पताललाई अनुमति 556
फेरि २२ सीडीओसहित ३१ जनाको सरुवा 13541
दर्ता भयो राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) 1496
अस्थायी शिक्षकको परीक्षा अनिश्चित 833
राज्यमन्त्री थपिएपछि ‘भद्रगोल' मन्त्रालय 19820
किसुनजीको चिठी 273
मागेरै देश चल्दैन 819
असफल संशोधन : सफल राजनीतिक दिशा 2447
सडक दुर्घटनामा पूर्व प्रहरी हवल्दार श्रेष्ठको मृत्यु 2601
मोटरसाइकलले ठक्करबाट एक यात्रुको निधन 5061
खोलामा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु, दुई जनाको उद्धार 382
सशस्त्र प्रहरी जवानको हत्या 11934
पाशुपत क्षेत्रमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड 762
पुल भाँचिनुमा प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी 671
बेलायतमा सगुनको कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया सुरु 1824
फेसबुकका सिइओ मार्क जुगरवर्क फेरी बुवा बन्‍दै 8518
कुशे औँसी र तीजमा टेलिकमको अफर 8661
नेत्रहीनले पढ्न र सुन्न सक्ने सफ्टवेयर पाए 876
काठमाडौंमा इन्टरनेटको नीति, कानूनी प्रयोगबारे सेमिनार सुरु 762
'आर्थिक समृद्धिका लागि आइटी उद्योग बनाउन सरकार तयार' 1730